MACD Magic Trend Forex Ukuhweba Isu | ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex MACD Magic Trend Forex Ukuhweba Isu
Okthoba 21, 2020
Ukuzuza ezimakethe ze-forex kumayelana nokuqonda ukuthi imakethe ihamba kanjani. Imayelana nokuba nomqondo omuhle wokuthi imakethe iphokophele kuphi isikhathi esiningi. Abahwebi bathola leli khono isikhathi esengeziwe njengoba befunda futhi bebuka izimakethe. Abanye abathengisi bachitha izinkulungwane zamahora bebuka amashadi entengo ngaphambi kokuba baqonde ukuhamba kwemakethe. Abanye abathengisi basebenza ngababili bezimali ezithile ukuze bazi ukuthi labo babili bahamba kanjani usuku nosuku. Abanye abathengisi bafunda isenzo samanani namaphethini entengo ukuze balindele ukunyakaza kwemakethe. Noma kunjalo, konke lokhu kuthatha isikhathi ukubeka abadayisi abasha engcupheni. Lesi yisizathu esenza abathengisi abaningi behluleke. Abathengisi abasha baqala ukungazi ukuthi benzeni. Yilabo abadlulela phambili kuphela abafunda ezimakethe futhi baphumelele. Noma kunjalo, kunezindlela abathengisi abasha abasengazuza ngazo emakethe. Enye yezindlela zokwenza lokhu ngocwaningo lobuchwepheshe nezinkomba. Abathengisi abasha bangalindela ngokusobala ukuthambekela nokuguqulwa ngokusebenzisa izinkomba zobuchwepheshe, ebavumela ukuthi babe nenzuzo.
I-MACD Magic Trend isu lokuhweba elisuselwa kuzinkomba ezimbalwa ezisiza abathengisi ukuthi balindele izinkomba zenkambiso nokuguqulwa. Ivumela abathengisi ukuthi banqume ngokufanele ukuthi iyiphi indlela abazohamba ngayo, uzothatha nini ukuhweba nokuthi uzophuma nini.
2 Thenga Thenga Inkomba Yomlingo
4.3 Indlela ukufaka MACD Magic Trend Forex Ukuhweba Isu?
Ukuhlangana okumaphakathi kokuhlangana kanye nokwehlukana (MACD) ingenye yezinkomba zobuchwepheshe ezisetshenziswa kakhulu. Kuyinto inkomba oscillating ekhombisa mkhuba isiqondiso umfutho.
I-MACD ngokuyisisekelo ihlanganisa umehluko phakathi kwezilinganiso ezimbili ezihambayo, imvamisa Isilinganiso Sokuhamba Esichazayo (UMAMA). Isilinganiso esinyakazayo sesikhathi eside sisusiwe kusukela kusilinganiso esimaphakathi sokuhamba esifushane. Bese, umehluko uhlelwe efasiteleni elihlukile njenge-histogram. Ama-histogram amahle akhombisa umkhuba we-bullish ngenkathi ama-histogram angalungile akhombisa ukuthambekela kwe-bearish. Ngendlela, i-MACD histograms ngokuyisisekelo iyisiginali yokungena yecebo le-crossover.
I-MACD nayo inomunye umugqa obizwa ngokuthi ulayini wesiginali. Ulayini wesiginali uvame ukutholakala ku-Simple Moving Average (Isikolo sebanga eliphezulu), ehlelwe eceleni kwama-histogram we-MACD. Izimpawu zokungena nazo zingakhiwa ngokususelwa ekweqeni kwama-histograms nolayini wesiginali.
Thenga Thenga Inkomba Yomlingo
Isikhombi se-Buy Sell Magic singenye yezinkomba engizithandayo zokuhweba. Lokhu kungenxa yokuthi kuyinkomba enembile kakhulu esiza ukunquma ukuphakama nokwehla komkhuba waphakathi nonyaka.
Le nkomba ngokuyisisekelo iyinhlanganisela yenkomba ye-ZigZag eguquliwe kanye ne-Parabolic Stop and Reverse (PSAR), zombili okuyizinkomba ezinhle kakhulu zokuguqula isimo. Uma ungagcina inkomba ye-Buy Sell Magic eduze, uzobona ukuthi kunembe kangakanani ukukhomba iziqongo zangempela nemikhombe yomkhuba. Amaphuzu okuthi uma ekhonjwa, kungavumela abathengisi ukuthi bathole inzuzo enkulu emakethe.
Isikhombi se-Buy Sell Magic sibuye siprinte kalula imicibisholo ekhombisa amaphuzu abuyela emuva ngqo. Le micibisholo isebenza njengezimpawu zokungena abadayisi abangazisebenzisa ezinhlelweni zabo zokuhweba.
Lelisu isu lokuguqula umkhuba ngokuya ngokuhlangana kwenkomba ye-Buy Sell Magic kanye ne-MACD. Yize inkomba ye-Buy Sell Magic ithanda ukuba nenembile kakhulu njengenkomba ezimele, kwesinye isikhathi kungabuyisa ukulahleka uma ukuthambekela kwemakethe kubuyela emuva ngokushesha okukhulu. Ukusebenzisa inkomba ye-Buy Sell Magic kanye nenkomba ye-MACD ndawonye kukhuphula izinga lokuwina ngoba zombili izinkomba ziyancomeka. Izimpawu ezikhiqizwe yizinkomba ezimbili eziqondaniswe ngandlela thile zivame ukuba namathuba aphezulu okubuyisa ukuhweba okunenzuzo.
Isikhathi sesiginali: 12
Isikhathi Somcibisholo: 3
I-EMA elungisiwe: 12
Isikhombi se-Buy Sell Magic kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phezulu namachashazi ngezansi kwesenzo sentengo esibonisa ukuguqulwa kwesimo se-bullish
I-histogram ye-MACD kufanele yeqe ngaphezu kuka-zero ekhombisa ukuguqulwa kwesimo se-bullish
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba ye-Buy Sell Magic iphrinta umcibisholo okhomba phansi
Isibonisi se-Buy Sell Magic kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phansi namachashazi ngenhla kwesenzo sentengo esibonisa ukuguqulwa kwesimo se-bearish
I-histogram ye-MACD kufanele yeqe ngezansi kuka-zero ekhombisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bearish
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba ye-Buy Sell Magic iphrinta umcibisholo okhomba phezulu
Lelisu lokuhweba lisebenzisa inkomba ephezulu yamathuba, okuyinto inkomba Buy Thengisa Magic. Ukusebenzisa amasignali okungena akhiqizwe yinkomba ye-Buy Sell Magic kusivumela ukuthi sibe nezinga lokuwina eliphakeme ngokuqhathaniswa. Ukuhweba amasiginali akhiqizwe yinkomba ye-Buy Sell Magic ngokuhlangana nezimpawu zokungena ze-MACD kusivumela ukuthi sibe nezinga elingcono lokuwina. Ukuhweba ngaleli qhinga kungaletha imbuyiselo enhle ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokuwina okungaguquguquki okungenziwa yileli qhinga.
Ukusebenzisa leli su emakethe enokuthambekela okuphezulu kokuthambekela kusivumela ukukhulisa ukubuya kwethu. Noma kunjalo, ukusebenzisa leli qhinga emakethe ephansi yokungazinzi noma emakethe kungahle kube nomphumela wokulahleka ngenxa yokuhlehliswa kwasekuqaleni kwezinye izitayela. Sebenzisa leli qhinga ngesimo esifanele semakethe futhi ungathola inzuzo ethile ngokuhamba kwesikhathi.
MACD Magic Trend Forex Trading Strategy is a combination of Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-MACD Magic Trend Forex Trading Strategy inikeza ithuba lokuthola izici ezihlukile namaphethini kumanani wamanani angabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka MACD Magic Trend Forex Ukuhweba Isu?
Thwebula MACD Magic Trend Forex Trading Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha MACD Magic Trend Forex Ukuhweba Isu
Uzobona MACD Magic Trend Forex Ukuhweba Isu iyatholakala kwi Ishadi yakho
Isiqephu esedluleTime Bar Custom Monthly MT5 Indicator
Isihloko esilandelayoInvert Bar Plus MT5 Indicator
Intengo EMA Reversal Forex Trading Strategy
Bykov esiginali Forex Scalping Strategy
Binary Comodos RSI Forex Ukuhweba Isu
Izinkomba ze-Forex MT54223